» रेडियो अनमोलका बालकृष्ण दाहाललाई अवार्ड, कसले कुन अवार्ड प्राप्त गरे ?
रेडियो अनमोलका बालकृष्ण दाहाललाई अवार्ड, कसले कुन अवार्ड प्राप्त गरे ?
१४ बैशाख २०७६, शनिबार १८:२४
मकवानपुर, १४ बैशाख । मकवानपुरको हेटौँडाबाट प्रसारणमा आएको रेडियो अनमोल ९० मेगाहर्जका स्टेसन संयोजक बालकृष्ण दाहाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट युवा सञ्चार उद्यमी अवार्ड’ प्रदान गरिएको छ । उनलाई मकवानपुर जर्नालिजम अवार्ड २०७५ अन्तर्गत क्रियशन मिडिया एण्ड इभेन्ट म्यानेज्मेन्ट प्रालिले अवार्ड प्रदान गरेको हो । स्थापनाको छोटो समयमा नै लोकप्रिय बन्न सफल रेडियोका संयोजक दाहाल मकवानपुरका एफ.एम. सञ्चालक युवाहरुमध्ये सबैभन्दा कान्छा युवा उद्यमी समेत हुन् ।
अवार्ड वितरण समारोहमा मकवानपुरका सर्वाधिक चर्चित अग्रज सञ्चारकर्मी दर्शन क्षेत्रीलाई रेडियो पत्रकारिता अवार्ड प्रदान गरिएको छ । उनी रेडियो थाहा सञ्चारमा कार्यरत छन् । त्यस्तै प्रष्ट खबर डटकमका सम्पादक रुपेश दुलाललाई ‘शिवसत्य रुपा सिलवाल आर्थिक पत्रकारिता अवार्ड २०७५’ बाट सम्मान गरिएको छ । उनलाई नगद ११ हजार १ सय ११ रुपैँया र सम्मान पत्र सहित सम्मान गरिएको हो । ‘बेलप्रसाद–कमला दाहाल ग्रामिण सामाजिक पत्रकारिता पुरस्कार’ बाट पत्रकार शिवकुमार काशी सम्मानित भएका छन् । उनलाई नगद ११ हजार १ सय ११ रुपैँया र सम्मान पत्र सहित सम्मान गरिएको छ ।
त्यस्तै उत्तरी क्षेत्रको सर्वोत्कृष्ट क्रियाशिल पत्रकारिता अवार्ड थाहा नगरकी मञ्जरी बलामीलाई प्रदान गरिएको छ । सर्वोत्कृष्ट चलचित्र पत्रकार वर्ष अवार्ड सिधाखबर डटकमका श्रीराम अर्जुनलाई प्रदान गरिएको छ । कार्यक्रममा लाईफटाईम अचिभमेन्ट अवार्डबाट बरिष्ट पत्रकार तथा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर ३ का अध्यक्ष प्रताप विष्टलाई सम्मान गरिएको छ । त्यस्तै पत्रकार कपिल खड्कालाई सर्वोत्कृष्ट क्यामेरामेन अवार्ड प्रदान गरिएको छ । कार्यक्रममा सर्वोत्कृष्ट वर्ष पत्रकार अवार्ड, आर्थिक पत्रकार अवार्ड, क्रियाशिल महिला पत्रकार अवार्ड, अनलाईन पत्रकार अवार्ड, शिक्षा, पर्यटन पत्रकार अवार्ड, सामाजिक पत्रकार अवार्ड, टेलिभिजन पत्रकार अवार्ड, फिचर रिपोर्टिङ, युवा पत्रकार, उदयीमान पत्रकार लगाएतका २३ विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न विधामा रहेको खबरब्रेक वर्ष सम्मान समेत प्रदान गरिएको थियो । शुक्रबार थाहा नगरपालिकामा भएको कार्यक्रममा ‘मकवानपुरको पर्यटन प्रर्वद्धनमा मिडियाको भूमिका’ विषयक सेमिनारको समेत आयोजना भएको आयोजक क्रियशन मिडिया एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष धर्मेन्द्र दाहालले बताएका छन् । कार्यक्रमलाई मुख्य प्रयोजकको रुपमा गोदावरी स्टिलले प्रायोजन गरेको हो ।